February 27, 2021 - Padaethar
February 27, 2021 by Padaethar
ရည်းစားများတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုမှ ချစ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း(၅)ခု ရည်းစားများတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ချစ်ဖို့ဆိုရင် တွန့်နေတတ်ကြတယ်မို့လား။ ကိုယ်ကသာ ရည်းစားတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထားချင်ထားနေမှာဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကတော့ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ချစ်တတ်တဲ့သူမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်မို့လား။ ဒါပေမယ့် ရည်းစားများတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုမှ ချစ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေ သပ်သပ်ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီ ကောင်းကွက်လေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ရည်းစားများတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုပဲ ရှာတော့မယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီနော်…။ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား အတွေ့အကြုံဆိုတာ ရည်းစားထားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုပြောတာနော်။ ရည်းစားမထားဖူးသေးတဲ့သူဆိုရင် လမ်းလျှောက်ရင်း လက်လေးတွဲဖို့ကရှက်နေတာမျိုး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့််ရင်တောင် အတွဲခုံထိုင်ဖို့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတာမျိုးနဲ့ အချိန်တော်တော်ယူရပါတယ်။ ရည်းစားများတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့ အဲလိုတွေ သင်ပေးနေစရာမလိုတော့ဘူး။ သူတို့ကတောင် ကိုယ့်ကို ပြန်သင်ပေးသွားဦးမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ဘယ်လိုသဘောထားရှိသလဲဆိုတာ နားလည်နိုင်တယ် သူတို့က အတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်က မျက်နှာလေး တစ်ချက် ပျက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဘာကို … Read more
အချစ်နဲ့ ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့်အရာတွေ
အချစ်နဲ့ ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့်အရာတွေ ချစ်တို့ရေ အချစ်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို လက်မလွှတ်သင့်တာမလို့ ချစ်ကြလိုက်စို့နော်။ အရွယ်တစ်ခုရောက် လာရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ ရှာတွေ့မှာပါ။ အချစ်နဲ့ ထိတွေ့ဖြစ်ကြမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ အချစ်ဆိုတာကို လူအတော်များများက နာကျင်စရာလို့ တွေးနေတတ်တယ်နော်။ တကယ်တော့ ချစ်နည်းမမှန်လို့ ဖြစ်ကြတာပါ။ ချစ်နည်းသာမှန် မယ်ဆိုရင် အချစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ရလာနိုင်မယ့် အချက်တွေ ရှိတယ်နော်။ ပျော်ရွှင်စေတယ် သမီးရည်းစား အချစ်အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ်ကလည်း အချစ်ပါပဲ။ အချစ်ရှိနေရင် ဘဝက နေပျော်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းလာမှာ အသေအချာပါပဲ။ လူတော်တော်များများ ပျော်ရွှင်ကြာတလည်း အချစ်ခံရခြင်းနဲ့ အချစ်ကြောင့်ပါပဲ ချစ်တို့ရေ။ ကျန်းမာရေး ကောင်းစေတယ် အချစ်ဆိုတာ စိတ်ကဖြစ်တည်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု အရာတစ်ခုပါပဲ။ … Read more
ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေနေ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေနေ “ငါတကယ်အချစ်ခံနေရပီလား…
ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေနေ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေနေ “ငါတကယ်အချစ်ခံနေရပီလား… ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေနေ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေနေ “ငါတကယ် အချစ်ခံနေ ရတယ်” ဆိုတဲ့ ခံစားမှု မျိုးလေး ရရှိနေ ဖို့တော့ တကယ် လို အပ် ပါတယ်။ အချိန်မှန် စာပို့ ဖုန်းတွေပြောနေ တာထက် အများကြီးပိုတယ်။ နေကောင်းအောင်နေ ထမင်း များများစား ဆို တဲ့ အမှာ စကားတွေ ထက် အများကြီး ပိုတယ် Goodnight အိပ် မက်လှ လှမက် ပါစေ ဆိုတဲ့ Message ထက် လည်းအများကြီး ပိုပါ တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် သက်ရောက် လာတဲ့ အပြု အမူ တိုင်းမှာ … Read more
ရုပ်ပုံ တွေကပြောပြမယ့် သင်တို့စုံတွဲ ရဲ့အချစ်ရေး သင်တို့ရဲ့ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေး ကို ရုပ်ပုံ တွေကဆင့်ပြောပြတာဟာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်ပုံ တွေဟာ လူမှု စိတ်ပညာရှင် တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ် တာကြောင့် သင်တို့စုံတွဲ နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရုပ်ပုံ ကိုလက်နဲ့ထိပြီး သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေး အခြေအနေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ( 1 )သင်တို့စုံတွဲ လိုပါပဲ အမျိုးသမီး လေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူ အတွက် ဂုဏ်ယူနေပြီးတော့ အဲဒီ့အကြောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပြောပြချင်နေ ပါတယ်။ သူမ ကအရမ်းကို လွတ်လပ် ပျော်ရွင်နေပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ကဘယ်လိုပဲထင်ထင် သူမကဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမရွေးချယ်ထားတဲ့ ချစ်သူ က သူမအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေပြီးတော့ သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး … Read more
ဒီ (၅)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ်ပါ
ဒီ (၅)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ်ပါ သင့် ချစ်သူမိန်းကလေး ကို ရင်ခုန်သံ မြန်လာစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ? ယခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၅) ချက်ကအရမ်း Romantic မဆန်ပေမယ့် သင့်ချစ်သူမိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲသင့်ကို နှစ်ဆပိုချစ်လာမှာပါ။ ၁။ သူမ ကို အမြဲ ကာကွယ်ပေးခြင်း သူမ နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရက် နေအရမ်းပူလာရင် သင် က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ တံခါးမှန်သမျှကိုသင်က ကြိုဖွင့်ထားပေးတာ၊ သူမ နဲ့ ကားအတူစီးလာရင်လည်း ကားတံခါးကြိုဖွင့် ထားပေးတာ၊ အစရှိတဲ့အချက်တွေဟာ သေးသေးမွှားမွှားလို့ ထင်ရပေမယ့် သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို လူကြီးလူကောင်း … Read more
ကောင်လေးတွေ တိတ်တိတ်လေးသဘောကျရတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ပုံစံလေးများ ကော်လေးတွေဟာ တော်ရုံတန်ရုံ သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြလေ့မရှိကြပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ်က သူ့မျက်လုံးထဲ အရမ်းလှနေပေမယ့်လည်း ခေီးကျူးဖို့နေနေသာသာ ဘာတွေဝတ်လာလဲတို့ ပြောတာမျိုးလေးတွေပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲ ချစ်သာမိန်းကလေးကို တိတ်တိတ်လေး သဘောကျရတဲ့ အချိန်လေးတွေ ဟှိနေပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကတော့….. ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတာ သူနဲ့တွေ့ဖို့ကို အချိန်ပေးပြီး မိတ်ကပ်လေးတွေ လိမ်းလာတာမျိုး၊ အဝတ်အစားလှလှလေးတွေ မရိုးအောင်ဝတ်လာတာမျိုးဆိုရင် သူတို့တွေက သဘောကျကြ ပါတယိတဲ့။ အလေးထားသဘို ခံစားရပြီး လူရှေ့သူရှေ့လည်ရ သိပ်ထုတ်ပြ ချင်ဆိုပဲ။ သူတို့ကိုလမ်းပြတဲ့အခါ လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ရင်ဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးတာတွေ၊ လမ်းပြပေးတာမျိုးတွေကို သူတို့ မကြိုက်ဘူးလို့ ထင်နေရင် မှားမှာပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာဟာ သူတို့ဘဝအတွက် တီးတိုးတိုင် ပင်ဖော်ရစေပြီး အထင်ကြီးလေးစား … Read more
အမျိုးသမီးတွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အဆင့် အတန်းဆိုလို့ အပျံစား ကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီး တာတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အ တန်းဆိုတာ လူမှုအ … Read more
ရေရှည်လက်တွဲပျော်ရွှင်တဲ့ Relationship တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၄) ချက် အချစ်ရေးအချစ်ရာဆိုတာ ဘယ်တော့မှလွယ်ကူဖြောင့်တန်းတယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Relationship တစ်ခု ရေရှည်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသာ မှန်မှန်ကန်ကန် လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ Relationship တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ (၁) နားထောင်ခြင်းက အရေးပါပါတယ် စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခြင်းဟာ အရေးပါတဲ့ soft skill ပါ။ လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်အသံကို ပြန်ကြားရတာကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်လူရဲ့ အသံကို နားထောင်ပေးခြင်းရဲ့ အားက ပိုပြီး အရေးပါတဲ့ အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားဘဝပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်သည်ဘဝပဲ ရောက်ရောက် အတူတူ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနေရချိန်မှာကိုယ့်ဇနီးမယား ၊ ရည်းစားချစ်သူရဲ့ … Read more
ဒီစကား(၆)ခွန်းကိုကြားဖူးရင်တော့ သင့်ကိုသူချစ်တယ်လို့သွယ်ဝိုက်ပြောနေတာပါ …
ဒီစကား(၆)ခွန်းကိုကြားဖူးရင်တော့ သင့်ကိုသူချစ်တယ်လို့သွယ်ဝိုက်ပြောနေတာပါ … ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောနေမှ ချစ်တယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုတခြားသူတွေလိုမျိုး ချစ်တယ်လို့တဖွဖွမပြောလို့ဆိုပြီး စိတ်တိုင်းမကျတွေဖြစ်မနေပါနဲ့နော်။ သူသာ ဒီစကားလေးတွေကို အမြဲပြောတတ်တယ်ဆိုရင် သူသင့်ကို ချစ်တယ်လို့ပြောနေတာနဲ့အဓိပ္ပါယ်အတူတူပါပဲနော်။ (၁) မင်းအတွက်အမြဲရှိနေမယ် လူတစ်ယောက်အတွက် နာကျင်ဝမ်းနည်းစရာတွေ ရင်ဖွင့်ရမယ့်သူ မရှိတာဟာ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါထက် ဆိုးတာကတော့ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို ဝေမျှရမယ့်သူ မရှိတာပါပဲ။ သင့်ချစ်သူက သင့်အတွက် နာကျင်စရာတွေရင်ဖွင့်ဖို့၊ ပျော်ရွှင်စရာတွေဝေမျှဖို့ အမြဲအသင့်ရှိနေမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဘာဖြစ်ဖြစ် သူဘေးနားမှာအမြဲရှိနေမယ်လို့ပြောရင် အဲ့ဒါက သင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ (၂) မင်းအတွက်အရမ်းဝမ်းသာတယ် သင်သာ တစ်ယောက်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုက သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူက မင်းပျော်ရင် ငါလည်းပျော်တယ်လို့ ပြောလာရင် သူသင့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ … Read more
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တက်တဲ့ စုံတွဲများအတွက် မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက် သူများသာ ဖတ်ရန် ဖုန်းခေါ်လို မအားရင် သေချာပြီ ဒီနေ့ ရန်ဖြစ်ရတော့ မယ် ဆိုတာ။ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးနဲ များဖုန်းပြောတာလိုပြောရင် သဝန်တိုပြီး ဖြေရှင်းမရ ၊ပြသနာရှာ တက်တဲ့ ချစ်သူ တစ်ယောက်ရှိနေပြီလား။ ဒါဆို သင်ဟာ အရမ်းကံကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ သင့်အပေါ်သူ အရမ်းချစ်တဲ့ သူမို့ပါ။ စိတ်ဆိုးပြီး ဖုန်းကို Blockထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲ ဖုန်ပြန်ဆက်ချော့ မှာကို မျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ပေါ် စိတ်ဆိုး တိုင်း Blockတိုင်း သင်ဘက်က တခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။ မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း Facebookကို Blockလိုက် ဖုန်းကိုBlockလိုက်နဲ အဲလို … Read more